विशेष – Page2– Banking Khabar
बैंकिङ व्याजबाट आउने आम्दानीको कति तिर्ने कर ?
विजय पराजुली/बैंकिङ खबर । बैंकहरुले संकलन गर्ने निक्षेप प्रकारका हुन्छन्ः संस्थागत निक्षेप र व्यक्तिगत निक्षेप । संस्थागत निक्षेप भन्नाले कुनै पनि सार्वजनीक संस्थान अर्थात पब्लिक लिमिटेड कम्पनीबाट प्राप्त गर्ने निक्षेपलाई बुझीन्छ । व्यक्तिगत निक्षेप भन्नाले कुनै पनि ब्यक्तिबाट उसले संचालन गरेको …
विजय पराजुली/बैकिङ खबर । एनजिओको रुपमा लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गरीरहेको २४ वटा संस्थाको रुपान्तरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा चरणमा पुगेको छ । २०७५ असोज मसान्त भित्रमा रुपान्तरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुसार प्रक्रिया अगाडी बढिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । २०४९ …
रुपा कोइराला/बैंकिङ खबर । केही वर्षअघिसम्म ८७ वटा रहेको विकास बैंकको संख्या ३३ मा झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसन नीति ल्याएपछि घट्न थालेको विकास बैंकको संख्या पुँजी वृद्धिको योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै उल्लेख्य रुपमा घटेको हो । जसअनुसार, …
बैंकिङ खबर । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्सटेक) को चौथो शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । बिहीवारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको सम्मेलन शुक्रवार काठमाडौं १८ बुँदे घोषणपत्र जारी गर्दै सकिएको हो । बिम्सटेक समापन समारोहमा बिमस्टेकका …
बिम्सटेक सम्मेलन २०१८ : यस्ता छन् प्राथमिकताका विषयहरु
बैंकिङ खबर । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास अर्थात बिम्सटेक सम्मेलन यसपटक काठमाडौमा हुँदैछ । अगष्ट ३० र ३१ अर्थात यही भदौ १४ र १५ गते हुन लागेको सम्मेलनमा पाँच क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिने भएको …
तपाईले बैंक डिपोजिटबापत आउने ब्याजको कर कति तिर्नुपर्छ ?
विजय पराजुली/बैंकिङ खबर । बैंकहरुले संकलन गर्ने निक्षेप प्रकारका हुन्छन्ः संस्थागत निक्षेप र व्यक्तिगत निक्षेप । संस्थागत निक्षेप भन्नाले कुनै पनि सार्वजनीक संस्थान अर्थात पब्लिक लिमिटेड कम्पनीबाट प्राप्त गर्ने निक्षेपलाई बुझीन्छ । व्यक्तिगत निक्षेप भन्नाले कुनै पनि ब्यक्तिबाट उसले संचालन …
खराब कर्जा सुधार गर्दै वाणिज्य बैंकहरु, १७ बैंकको घट्यो
रुपा कोइराला/बैंकिङ खबर । गत आर्थिक वर्षमा ११ वटा वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । बाँकी १७ वटा वाणिज्य बैंकले भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यको तुलनामा खराब कर्जा घटाएका छन् । सानिमा बैंकको खराब कर्जा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा …
अर्थसमितिमा गभर्नरको सम्बोधन : आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतभन्दा नाघ्न सक्ने
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरिएको आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत भन्दा नाघ्न पनि सक्ने बताएका छन् । मंगलबार अर्थसमितिमा सम्बोधन गर्दै गर्भनर डा. नेपालले यस्तो बताएका हुन् । राष्ट्र बैंकको हालको …
आठ बैंकको निक्षेप संकलन एक खर्बमाथि, कर्जा प्रवाहमा कुन अगाडी ?
बैंकिङ खबर । मुनाफा आर्जनमा सबैभन्दा अब्बल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक निक्षेप संकलन गर कर्जा प्रवाहमा पनि सबैभन्दा अगाडी देखिएको छ । यस सँगको कडा प्रतिष्पर्धामा एनआईसी एशिया बैंक रहेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआईसी एशिया बैंक लगायत नेपाल …
पूराना नौ जीवन बीमा कम्पनी : कुनको मुनाफा कति ?
बैंकिङ खबर । पूराना जीवन बीमा कम्पनीहरुको नाफा गत आर्थिक वर्षमा ६१.८७ प्रतिशतले बढेको छ । नौ वटा जीवन बीमा कम्पनीले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष नौ जीवन बीमा कम्पनीको नाफा …
अधिकांश बैंक अर्वपति क्लबमा, नविलको नाफा चार अर्बमाथि
रुपा कोइराला/बैंकिङ खबर । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाहेक क वर्गका सबै बैंकले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । २७मध्ये २३ वटा बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा खुद मुनाफा बढेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । २५ वटा बैंकको नाफा …
बैंकिङ खबर । विपन्न वर्गमा लक्षित भनिएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु पनि अति विकट क्षेत्रमा शाखा विस्तारमा चुकेका छन् । अतिविकट जिल्ला डोल्पामा जम्मा दुई वटा माइक्रोफाइनान्सले सेवा दिइरहेका छन् । यही जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालय भएका कुनै पनि लघुवित्त छैनन् । …
बझाङमा बैंकको झल्को मेट्दै लघुवित्त
बैंकिङ खबर । अतिविकट जिल्लाहरुमध्येको एक बझाङ जिल्ला वित्तीय पहुँचका हिसाबले निकै पछाडी रहेको छ । ठूला बैंकहरुको उपस्थिती र न्युन छ नै, यहाँ माइक्रोफाइनान्सहरु समेत निकै कम संख्यामा पुगेका छन् । ग्रामीण तथा दुर्गम भेगलाई लक्षित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु …
बैंकिङ खबर । स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंक नेपाल राष्ट्र बैंककै मातहतमा संचालित क वर्गको बैंक हो । अधिकतम विदेशी लगानीमा स्थापित यो बैंक विभिन्न कारणले आलोचित भइरहेको छ । सूचना लुकाउने, केन्द्रीय बैंकको निर्देशनको पालना नगर्ने लगायतका कारण यो बैंकको धेरै …